Klever Utshintshiselwano ukuqalisa iimpawu ezintsha ze-NFT | Klever ezezimali
Klever Utshintshiselwano ukuqalisa iimpawu ezintsha ze-NFT
Ukusukela nge-17 kaJanuwari, abasebenzisi baya kuba nakho ukufaka, ukurhoxisa, ukuthengisa nokuthenga ii-NFTs kwi Klever Iqonga lokutshintshiselana.
Ukubonelela ngeenkonzo ezizodwa ngakumbi, Klever Shintsha iza kukhupha inkonzo entsha eza kuvumela abasebenzisi ukuba bafake, barhoxise, bathenge kwaye bathengise ii-NFTs zabo.
Isici siya kuvumela abasebenzisi ukuba badibanise izikhwama zabo kunye noluhlu lwe-NFTs kwiqonga. Ukongezelela, iqonga liya kuba ne-web3 yokudibanisa eya kuvumela umsebenzisi ukuba adibanise ngokuthe ngqo Klever yiprojekti (iyeza kungekudala), iWallet Connect, iTronlink, kunye nezinye ezininzi.
Ukunika iinkcukacha ezingakumbi kule nto, uFelipe Rieger, uMphathi weMveliso ye Klever Utshintshiselwano kunye neNtloko ye-NFT yathi, “Inqaku liza kuba bukhoma nge-17 kaJanuwari 2022. Ngaphandle kokurhweba nge-NFTs, abasebenzisi banokurhweba nge-cryptocurrency enye Klever Iakhawunti ye-ID."
Klever Utshintshiselwano lwenze indawo yentengiso ye-NFT kwiqonga labo, eya kusombulula umba owawukho ngaphambili malunga nokufumaneka kwee-NFTs zokurhweba. I-NFTs ibe yindawo ebaluleke kakhulu yophuhliso ngaphakathi kwe-crypto world, njengoko kukho iiprojekthi ezintsha ezisungulwa yonke imihla.
Ii-NFTs zinokudalwa kwiibhloko ezahlukeneyo, kodwa imirhumo ephezulu yerhasi iyinkxalabo kubadali, abaqokeleli, kunye nabathengi kunye. Klever Utshintshiselwano luyayicombulula le ngxaki.
Ukubuza uRieger malunga neefizi Klever, uthe, "Klever Indawo yeMarike ye-NFT yindawo yentengiso esembindini, oko kuthetha ukuba ukugcinwa kwee-NFTs kuhlala nathi. Ke, umsebenzisi akahlawuli iifizi zeBlockchain ukuze adwelise, abhide okanye athenge ii-NFTs. Umthengisi we-NFT uhlawula umrhumo ophantsi kakhulu kuphela emva kokuba umyalelo ugqityiwe, kungekhona njenge-Ethereum kunye neeNdawo zeMarike ezinikezelweyo, apho iimali ezinkulu zegesi zihlawuliswa ngokudwelisa, ukubiza okanye ukudlulisa ii-NFTs ngeekontraki ezihlakaniphile.
Ukuqala, Klever Indawo yeMarike ye-NFT iya kuqala ngengqokelela ye-NFTs ye-Devikins kwaye kamva ikhuphele kwezinye ingqokelela ye-NFT. Nangona kunjalo, utshintshiselwano alubavumeli abasebenzisi ukuba benze ii-NFTs okanye bazenze, njengoko sigxile kumxholo ogcinwe kwii-NFTs ezikhethwe liqela lethu. Kanye KleverUmnatha oyintloko weChain uphila, siya kucinga ngayo, uRieger wongeza.
KleverItsheyini kulindeleke ukuba imiselwe nge-31 kaMatshi ngo-2022.
Ngokukhawuleza ukuba ukuqaliswa kwenzeka, Abaqokeleli be-NFT be-Devikins banokuqala ukubeka kunye nokudwelisa ii-NFT zabo kwi Klever Indawo yeMarike ye-NFT ngaphakathi koTshintsho, indawo yentengiso ekwi-intanethi efikeleleka kubasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezi-3.5 kwihlabathi liphela, ebavumela ukuba bafikelele kubaphulaphuli abaninzi.
Nawuphi na umsebenzi wobugcisa onokwenziwa ngokwedijithali ubizwa ngokuba yi-NFTs. Kutshanje, i-CEO yomsunguli we-Twitter uJack Dorsey uthengise i-tweet yakhe yokuqala yezigidi zeedola, uninzi lwe-NFTs luthengiswe ngezigidi ngezindlu zefandesi esekiweyo ezifana ne-Southey's, i-Christie, abanye.
Ngo-2021, i-NFTs ifumene i-traction, njengoko uninzi lweeprojekthi ze-crypto ziqalise i-NFTs, kwaye i-2022 iya kuba ngunyaka, apho i-NFTs inokuxoxisana khona. Kleverngokukhawuleza nangokulula.
Akukho kalo 4.95 Iivoti: 41